Diisambar 21 , 2020
Jimcihii la soo dhaafay, Diseembar 11, waxaa la soo saaray bilowgii sanad-guuradii siddeedaad ee "Cloud Cloud Choir" oo loogu talagalay Sabab, iyo codadka MMW ee ardayda heesaha fasalka 7aad ayaa ku soo biiray wadajirka dalwaddii.
Munaasabadda, oo sida caadiga ah lagu qabto Mall of America, ayaa sida caadiga ah waxaa ku jira kumanaan ka mid ah kaqeybgalayaasha oo qaadaya hees uu qorey toddoba iyo toban jir Zach Sobiech. Sobiech wuxuu qoray "Daruuro" bilo ka hor inta uusan u dhiman kansarka, isagoo fulinaya riyadii ahayd inuu qoro heeso isla markaana duubto album. Kooxda "Clouds Choir" ee Dhacdada Sababta ayaa sharfta dhaxalkiisa iyada oo kor loo qaadayo wacyiga ku saabsan kansarka carruurta.
"Waxaan baray heesta 'Cloud' ee Zach 'kooxdayda MMW iyada oo qayb ka ah hawl maalmeedkooda kululeynta codkooda sanad walba tan iyo 2013," ayay wadaagaan macallinka kooxda heesta ee Minnetonka Jena Menke. "Iyada oo qayb ka ah cutubka aan ku baranno fasalka, ardaydu waxay kaloo wax ka bartaan sheekada Zach. Ardaydaydu waxay jecel yihiin inay heesaan 'Daruuro,' way codsadaan! Heesta ayaa dhaqan caado ka noqotay MMW."
"Kooxda MMW Choir ma aysan seegin hal sano oo ay kaqeyb gasho 'Clouds Choir for a Cause', mana aanan dooneynin inaan fariisino midkaan," ayuu yiri Menke. "Barnaamijkeenna choral-ka wuxuu caddeeyay adkeysigiisa adkeysiga ah inta lagu jiro aafada, ka-qaybgalkiina dhacdadan ayaa aniga iyo ardaydaydiiba fursad u siisay inaan mar kale koox weyn u heesno - run ahaantii
Menke wuxuu rajaynayaa barashada "daruuraha" ardaygu wuxuu ka faa'iideystey muusikiiste ahaan iyo dad ahaanba. "Sannadkan, waxay iigu sii muhiimsaneyd in aan u isticmaalo 'daruuro' sidii markab dhammaanteen aan u qaadanno wanaag, rajo, iyo inaan maalin walba ugu noolaano si buuxda," ayuu yiri Menke.
Idaacadda Minnesota ee KS95 ayaa martigelisay dhacdadan foosha xun. Ka dhagayso waxqabadka 2020 degelkooda : http://bit.ly/34qWDtV